Zidane oo ka warbixiyay sababta ka dambeysay barbarihii ay Real Madrid la gashay kooxda Sociedad – Gool FM
(Spain) 21 Sebt 2020. Tababaraha kooxda Real Madrid ee Zinedine Zidane ayaa muujiyay sida uu uga xun yahay barbaraha goolal la’aanta ah ay Los Blancos la gashay naadiga Real Sociedad, kulankeedii ugu horreeyay horyaalka La Liga ee dalka Spain.
Kooxaha Real Sociedad iyo Real Madrid ayaa barbaro goolal la’aan ah ku kala baxay kaddib kulan aad u xiiso badan ay ku wada ciyaareen garoonka Reale Seguros, xilli ciyaartan ay qeyb ka aheyd kulamada Isbuuca labaad ee horyaalka La Liga.
Zinedine Zidane ayaa ciyaarta kaddib la hadlay warbaahinta wuxuuna yiri:
“Waxaan dareemeynaa murugo, waxaan soo bandhignay ciyaar wanaagsan qeybtii hore waxaana abuurnay hal ama labo fursadood”.
“Waxaan la kulanay hoos u dhac dhanka qaab ciyaareedkeena ah qeybtii labaad, waxaan abuurnay fursado dhowr ah, waxaana ku fiicneyn dhanka daafaca, balse waxaan dhalin weynay gool”.
“Waxaan seegnay taabashadii ugu dambeysay, waxaan u baahanahay inaan qabano shaqo badan oo goolka hortiisa ah, hagaajinta taabashada ugu dambaysa, xal u helista, iyo helitaanka boosaska hore, tani waa waxa ay tahay inaan sameyno”.
Si kastaba ha noqotee, Ciyaartan ku dhammaatay barbaro goolal la’aan ah, ayaa lagu arkay inay ka qeyb galeen tiro dhowr ciyaaryahano oo da’ayarta kooxda Real Madrid ah, oo ay ka mid ahaayeen Odegaard, Rodrygo, Vinicius Jr, Marvin, Ferland Mendy iyo Sergio Arribas.
Jamaahiirta Los Blancos ayaa rajeynaya in Zidane uu ka faa’iideysan doono qaladaadka kulankoodii koowaad si loo wanaajiyo waxqabadka Real, oo difaacaneysa koobka horyaalka Spain, iyadoo la fahansan yahay in tartan adag ay kala kulmi doonaan Barcelona iyo kooxaha kale ee La Liga.